Ishaja Ac / DC Factory - China Ishaja Ac / DC Abakhiqizi nabahlinzeki
Ishaja ye-AC ebekwe odongeni yakhiwe yiyunithi yokulawula eyinhloko, isikhombimsebenzisi sokusebenzisana komuntu nekhompyutha, isikhombimsebenzisi sokushaja, imitha nokushaja iyunithi. Iyamelana nokudlidlizela futhi inemisebenzi ephelele yokuvikela, isigaba sokuvikela yi-IP54, ehlanganisa indawo encane, ehlangabezana nokufakwa nokusetshenziswa kwezindawo zangaphakathi nangaphandle, futhi inika amandla we-AC ezimotweni zikagesi ezineshaja esemgodini.
CSI 60K500 / 750-EUJCabc amabhethri asezingeni eliphakeme e-AC / DC ashaja umshini wezimoto
I-CSI chungechunge leyunithi yohlobo lweshaja ehlakaniphile ye-AC / DC isinikeza ukuxhumana okulula komuntu-ikhompyutha, ukwakheka kwayo kwe-modular kusiza ukugcinwa kwemishini nokunwetshwa; ukwakheka kwezinhlaka ezintathu kuqinisekisa ukuphuma kwamandla AC 43kw kanye neDC 60kw ngasikhathi sinye.
CSP 15 / 30K-E uchungechunge ukushaja uhlelo AC / DC
I-CSP 15 / 30K-E uchungechunge oluhambayo oluhambayo ishaja esheshayo ye-DC iyamelana nokudlidliza futhi inemisebenzi ephelele yokuvikela, efanelekile eziteshini zokushaja amabhasi, izindawo zokupaka, izitolo zokulungisa izimoto, abakhiqizi bezimoto nezinye izindawo lapho amakhasimende angaphendula ngokushesha futhi avivinye amandla awengeziwe .
CSP 15 / 30K500J ephathekayo DC / AC ukushaja uhlelo
I-CSP 15 / 30K500-J ehambayo ishaja esheshayo ye-DC iyamelana nokudlidliza futhi inemisebenzi ephelele yokuvikela, efanelekile eziteshini zokushaja amabhasi, izindawo zokupaka, izitolo zokulungisa izimoto, abenzi bezimoto nezinye izindawo lapho amakhasimende angaphendula ngokushesha futhi avivinye amandla awengeziwe.
CSW 15 / 30K-E uhlelo lokushaja ngqo lwezimoto zikagesi
CSW 15 / 30K-E uchungechunge uhlobo olufakwe odongeni oluhlakaniphile ishaja esheshayo inemisebenzi ephelele yokuvikela, ifanelekile ngemvelo encane yokufaka ngaphakathi ezindlini, futhi evumelana nabasebenzisi ukushaja ngokushesha.
I-CSW 15 / 30K500J umshini wokushaja ugesi
CSW uchungechunge olufakwe odongeni olufakwe ku-DC ishaja esheshayo inemisebenzi ephelele yokuvikela, ilungele ukufakwa kwemvelo okuncane ngaphakathi ezindlini, futhi kulula kubasebenzisi ukushaja ngokushesha.
I-JFY ECM / ECH (isikwele) 15KW High-effidency Intelligent off grid inverter
Ukusebenza:> Okufakwayo okubanzi kwamandla kagesi ；> Ububanzi obubanzi bokukhishwa kwamandla kagesi we-DC, osebenzela izingqimba zesayizi ezincane ze-veh, amabhasi amancane kanye nabaqeqeshi; > Ukwazi ukumisa amamojula afanayo angaphezu kwama-20 afanayo; > Kusebenza kumaphayiphu wokushaja ahlanganisiwe, izinqwaba zokushaja okwehlukanisiwe, izinqwaba zokushaja ezikhethekile, izinqwaba zokushaja okuphathekayo namashaja okuhambisa njll. Ukusebenza kahle okuphezulu:> Ububanzi obubanzi bamandla ngamandla agcwele; > Ukwamukela inqubo ezenzakalelayo yokwabelana ngamadijithali ngokunemba okuphezulu kwe-curren ...